` ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို အရမ်းပဲလွမ်းနေပါပြီး ´ __ ဆိုးလ်ရှား
[Zawgyi] ` ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို အရမ်းပဲလွမ်းနေပါပြီး ´ __ ဆိုးလ်ရှား ” လာမယ့်ပွဲစဉ်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသင်းဆီမှာတိုးတက် လာအောင်လည်းကြိုးစားဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာပင်ကိုယ်အရည်အသွေးရှိကြတဲ့လူငယ်ကစားသမားများစွာ၊ အလုပ်အရမ်းလုပ်တဲ့ကစားသမားနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စမှာ အရည် အသွေးအပြည့်အဝရှိကြတဲ့ ကစားသမားတွေရှိနေတာကြောင့် ဒီလူစာရင်းမှာထူးခြားမှုတွေရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးကစားမယ့်ပွဲအတွက်အသင်းသားတိုင်းအဆင်သင့် ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ရဲ့အချိန်များစွာကိုဘောလုံးမကစားရဘဲရပ်နားထား ရတာကြောင့်မို့ ဘောလုံးပွဲကိုအရမ်းလွမ်းနေတဲ့ကစားသမား​တွေကိုပဲပွဲချိန်ပြည့် ပေးကစားဖို့မျှော်လင့်နိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆထားပါဘူး။ ကစားသမားတစ်ဦးကို ကျွန်တော်တို့ က * ပွဲတိုင်းနဲ့ မိနစ်တိုင်းကိုမင်း ကစားရမယ်* လို့ကြိမ်ဒဏ် လည်း ပေးလို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဘောလုံးပွဲစဉ်ကိုလပိုင်းအထိ ရပ်နားထားတာကြောင့် အသင်းမှာအပြောင်းအလဲတွေရှိလာနိုင်လို့ပါ။ အခုလက်ရှိအချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစာရင်းက တောင့်တင်း မှုနဲ့အတူ ကြီးမားတဲ့လူစာရင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကစား သမားတော်တော်များများကလည်း ပထမဆုံးကစားမယ့်ပွဲအ တွက်အပြိုင်အဆိုင်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ အကယ်၍ပထမ ဆုံးပွဲမှာမကစားရရင် ဒုတိယပွဲနဲ့တတိယပွဲတွေကိုပါဝင် …
[Zawgyi] လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်တစ်လုံးနှင့် ဆွမ်းချိုင့်တစ်လုံး ချထားတာတွေ့လို့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးကို ကြည့်လိုက်သောအခါ . . . စစ်ကိုင်းတိုင်း တစ်နေရာ လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်တစ်လုံးနှင့် ဆွမ်းချိုင့်တစ်လုံးချထားတာတွေ့တယ်။ဘယ်သူမှလည်း မစေခိုင်း၊ ဘာအဖိုးအခမှလည်း မရဘဲ ရဟန်းတစ်ပါးက သူဆွမ်းခံကြွချိန်မှာ မိုးရေနှင့် လမ်းတွေပြိုကျနေတာ ခရီးသွားတွေ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ပေါက်တူးတစ်ချောင်းနှင့် လမ်းပြင်နေလေရဲ့။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လျှောက်သင့်တာလျှောက်၊ လုပ်သင့်တာလုပ်ပြီးတော့ “တကာကြီး၊ ဦးဇင်းမျက်နှာပုံနှင့် ဘွဲ့ကိုတော့ မတင်နှင့်နော်၊ သံဃာတော်တွေအားလုံး ဒီလိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်လို့ပဲ မမှတ်သညာပြုကြပါစေ” တဲ့။စောစောက လမ်းမှာအမှိုက်ရှင်းနေတဲ့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးကိုလည်း ကိုယ်နှင့်အတူပါလာတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်က ဝတ္ထုငွေဆင်းလှူတာကို “ဒကာမကြီး လှူချင်ရင် ရှေ့ဂိတ်နားကကျောင်းမှာပဲ သံဃိက ရည်မှန်းပြီးလှူခဲ့လိုက်တော့” တဲ့။ ဘုရားသားတော်များဟာ သံသရာက …
အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆိတ်သား…ဆပ်သားပါဘုရား အမဲသားတော့စစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ)
[Zawgyi] အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆိတ်သား…ဆပ်သားပါဘုရား အမဲသားတော့စစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ) Vedio အောက်ဆုံးတွင် ပါဝင်သည်။ လူကြိုက်များနေတဲ့ ဗီဒီယုိုပါ။ရိုးသားပြီး မလိမ်ညာတဲ့ အညာသူတွေဘုန်းဘုန်းနဲ့ တွေ့ မှ အမှန်တရားတွေပေါ်လာပါတယ်။ဆိတ်သားဟုလို့ လားမေးတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား…မယုံပါဘူးပြောမှ အမဲသားပါ ဘုရားတဲ့။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး တစ်ခုခုပြောခဲ့ပါအူး။ရှဲထားကြပါအူးနော်…. [Unicode] အငျတာနကျမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ဆိတျသား…ဆပျသားပါဘုရား အမဲသားတော့စဈပါတယျဆိုတဲ့ ဗီဒီယို(ရုပျ/သံ) Vedio အောကျဆုံးတှငျ ပါဝငျသညျ။ လူကွိုကျမြားနတေဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ရိုးသားပွီး မလိမျညာတဲ့ အညာသူတှဘေုနျးဘုနျးနဲ့တှမှေ့ အမှနျတရားတှပေျေါလာပါတယျ။ဆိတျသားဟုလို့လားမေးတော့ ဟုတျပါတယျဘုရား…မယုံပါဘူးပွောမှ အမဲသားပါ ဘုရားတဲ့။ တောသူတှမေို့ မလိမျတတျဘူး ဗွောငျပဲ 🥰🤣စီပှားရေးမှာ ဉာဏျကောငျးဖို့လညျး လိုတယျနျော 😒🤣 Posted by IDEAS on Sunday, …
မြေကြီးက ရွှေသီးတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း တကယ့်ရွှေအစစ်တွေထွက်တဲ့ သစ်ပင်
[Zawgyi] မြေကြီးက ရွှေသီးတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း တကယ့်ရွှေအစစ်တွေထွက်တဲ့ သစ်ပင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ရွှေကြောရှာဖွေ ရင်းနဲ့ ရွှေတွေသီးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရတဲ့ ယူကလစ် သစ်ပင်တွေကို မတော်တဆ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပင်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချ ကြမလဲ။ ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း တွေကို အပင်တွေဆီက ခူးယူကြတာ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ ရှေးတုန်းကလဲ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ ပဒေသာပင်ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောဖူးကြပါတယ်။ ကဲအခု ကတော့ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ အပင်တွေ အကြောင်းတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေ အကြောင်း ပြောပြမှာပါ။ ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေ တွေ့တဲ့ နေရာ ကတော့ ခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသ တစ်ဖြစ်လဲ …
လူ(၃)ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ယာဉ်တိုက်မှုYBS-40 မှ ထွက်ပြေးတရားခံ ဖမ်းမိပါပြီ
[Zawgyi] လူ(၃)ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ယာဉ်တိုက်မှုYBS-40 မှ ထွက်ပြေးတရားခံ ဖမ်းမိပါပြီ လူ(၃)ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ဆင်မလိုက် ယာဉ်တိုက်မှု YBS-40 မှ ထွက်ပြေးတရားခံ ယာဉ်မောင်း ဖမ်းမိပြီဖြစ်။ကမာရွတ်ယာဉ် ပ(၉)မှ ထွက်ပြေးတရားခံ ဇော်ထက် ခေါ် ဇော်မျိူးထက်အား ဘားအံမြို့တွင် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တရားခံမှာ YBS-40 ယာဉ်မောင်းဖြစ်ကာ ဆင်မလိုက်တွင် TAXI အား ဝင်တိုက်မိသဖြင့် ယာဉ်မောင်း နှင့် မောင်နှမ(၂)ဦး သေဆုံးခဲ့မှုဖြစ်ပါသည်။ Credit Zin Moe (Photo – Aung Gyi) [Unicode] လူ(၃)ဦးသဆေုံးခဲ့သညျ့ ယာဉျတိုကျမှုYBS-40 မှ ထှကျပွေးတရားခံ ဖမျးမိပါပွီ လူ(၃)ဦးသဆေုံးခဲ့သညျ့ ဆငျမလိုကျ ယာဉျတိုကျမှု …
သားဖြစ်သူက ဖခင်လူနာစီးလာတဲ့ လူမှုကူညီရေးကားကို မကူညီဖို့ တားပြီး ဓာဖြင့်လိုက်ခုတ်ရန်ရှာတဲ့ ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ)
[Zawgyi] သားဖြစ်သူက ဖခင်လူနာစီးလာတဲ့ လူမှုကူညီရေးကားကို မကူညီဖို့ တားပြီး ဓာဖြင့်လိုက်ခုတ်ရန်ရှာတဲ့ ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ) Vedio အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ မကွေး ကြိုးကြာကန်ရွာမှာဖြစ်တာပါ။သားဖြစ်သူက လူမှုကူညီရေးကားထဲ ခဖင်ပါမှန်းသိရတဲ့အတွက် ကားကိုတားပြီး ရန်ရှာလို့လူနာ ဖခင်ကြီးကိုကားပေါ်ထားပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတာပါ။ မိခင်ဖြစ်သူမှာလည်း စိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ကာ သတ်မယ်ဆို ငါ့ကိုသာ အရင်သတ်သွားလိုက်ပါဟု စိတ်သောကရောက်နေရရှာပါသည်။လူမှုကူညီရေးမှ တာဝန်ရှိသူက ရဲများကိုဖုန်းဆက်သော်လည်းရောက်လာခြင်းမရှိကာ ကြာနေသည့်အတွက် လူနာမှာ သေမလားရှင်မလား အခက်အခဲဖြင့်ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။ ဒီလိုသားဆိုးသားမိုက်တွေရှိတဲ့အတွက် မိဘများစိတ်သောကရောက်ရပါတယ်ဗျာ။ဒီVedio လေးကိုမျှဝေပေးကြပြီး Shareပေးကြပါအူးခမျာ။ Original Writer [Unicode] သားဖွဈသူက ဖခငျလူနာစီးလာတဲ့ လူမှုကူညီရေးကားကို မကူညီဖို့တားပွီး ဓာဖွငျ့လိုကျခုတျရနျရှာတဲ့ ဗီဒီယို(ရုပျ/သံ) Vedio အောကျဆုံးတှငျပါဝငျသညျ။ …
ချစ်သူနဲ့ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်
[Zawgyi] ချစ်သူနဲ့ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ် အဆိုတော်အိမ့်ချစ် ဟာ ဒီနေ့ ၆.၆.၂၀၂၀ မှာ သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့နှစ်ဖက်မိဘများနဲ့ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မေလတုန်းကစေ့စပ်ပွဲလေးကို ဖျက်လိုက်ရပေမယ့်ရည်ရွယ်ထားစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီး မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကတော့ ကပ်ရောဂါကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန် အားလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှ ကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Photo – Eint Chit fb [Unicode] ခဈြသူနဲ့ တရားရုံးမှာ လကျမှတျထိုးလိုကျတဲ့ အိမျ့ခဈြ အဆိုတျောအိမျ့ခဈြ ဟာ ဒီနေ့ ၆.၆.၂၀၂၀ မှာ သူတို့ ခဈြသူနှဈဦးရဲ့နှဈဖကျမိဘမြားနဲ့ ရနျကုနျမွောကျပိုငျးခရိုငျတရားသူကွီးရှမှေ့ောကျမှာ မင်ျဂလာမျောကှနျးတငျလကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွပွီး ဖွဈပါတယျ။ မလေတုနျးကစစေ့ပျပှဲလေးကို ဖကျြလိုကျရပမေယျ့ရညျရှယျထားစီစဉျထားတဲ့အတိုငျး ဒီနမှေ့ာ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွပါပွီး မင်ျဂလာဧညျ့ခံပှဲကတော့ ကပျရောဂါကွီးပွီးဆုံးသှားတဲ့အခြိနျ …
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ေ ထာက်ခံစာ တစ်စောင်လျှင် (၅၀၀) ကျပ်ကောက်ခံနေ
[Zawgyi] တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ေ ထာက်ခံစာ တစ်စောင်လျှင် (၅၀၀) ကျပ်ကောက်ခံနေ ရန်ကုန်၊ ဇွန်လ (၅) တောင်ဥက္ကလာပမြို့၊ အမှတ် (၁၄)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည် ဧည့်စာရင်းတိုင်လျှင် (၂၀၀၀) ကျပ်၊ ထောက်ခံစာတစ်စောင်လျှင် (၅၀၀) ကျပ် ကောက်ခံနေကြောင်း ထောက်ခံစာသွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့သူ ကိုထွန်းထွန်းမင်းက ပြောပါတယ်။“ခရီးသွားဖို့ ထောက်ခံစာလုပ်တာ (၄) ယောက်ကို တစ်ယောက် ၅၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ နှစ်ထောင်ယူတယ်။ ဧည့်စာရင်းက နှစ်ထောင်ယူတယ်။ စုစုပေါင်း လေးထောင်ပေးခဲ့ရတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဧည့်စာရင်းနှင့် ထောက်ခံစာသွားရောက်ရယူရာ၌ ငွေတောင်းခံမှုကို ကိုထွန်းထွန်း မင်းက တောင်ဥက္ကလာပ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာစောနိုင်ထံ ဆက်သွယ်ပြောဆိုထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် …
ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အမေရိကန်ကို နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်
[Zawgyi] ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အမေရိကန်ကို နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၂ သန်း နားကို ကပ်လာပါပြီ။ လူဦးရေ အချိုးအစားနဲ့ စိတ်တွက် တွက်ကြည့်တော့ ဒါဟာ လူ ၁၇၅ ယောက်မှာ တယောက်နှုန်းလောက် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပြီ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ သေဆုံးတာကလည်း လူ တစ်သိန်းတစ်သောင်း ကျော်ပြီ။ယူအက်စ်မှာ ပေါ့စ်တစ် လူနာတွေ့တဲ့အခါ “ခင်ဗျား အိမ်မှာပဲ နေပါ၊ ဘယ်မှ မသွားပါနဲ့၊ ကျန်းမာရေး အာမခံ ဆောင်ထားပါ။ အာမခံ မရှိရင် ၂၁၁ ကို ဖုန်းခေါ်ပါ” ဆိုတာ မှာနေကြ စကားပါ။ပြဿနာက အဲဒီ ပေါ့စ်တစ် …
အကယ်၍သူသာ လူမျိုးရေးခွဲခြားသာခံရရင်ကွင်းပြင်ကိုသာ ထွက်ဖို့ရွေးချယ်မည်ဟု ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့သည့် အီဂါလို
[Zawgyi] အကယ်၍သူသာ လူမျိုးရေးခွဲခြားသာခံရရင်ကွင်းပြင်ကိုသာ ထွက်ဖို့ရွေးချယ်မည်ဟု ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့သည့် အီဂါလို ” ကျွန်တော့်အပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလုပ်လာမယ်ဆိုရင် လား? အကယ်၍ဒီအဖြစ်အပျက်ကတကယ်ဖြစ်လာရင် ဒိုင် လူကြီးကိုအကြောင်းကြားပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကြည့်တော့မှ သူတို့ဘာမှမလုပ်တော့ရင်ကျွန်တော်ကွင်း ပြင်ကနေထွက်သွားပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုလူမျိုးရေးခွဲ ခြားခံရတာတွေဟာ ဘယ်ကစားသမားကိုမှ မဖြစ်သင့်သလို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းအပေါ်မှာလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တရုတ်မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေတုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အနေနဲ့ နာမည်မျိုးစုံးနဲခွဲခြားကြတယ်။ပွဲပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်ဘူး။ အဝတ်စားလှယ်ခန်းကိုပဲမြန်မြန်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒေါသတွေထွက်ခဲ့တယ်။ ခွဲခြားတဲ့သူတွေကိုသိရတော့လည်းမခွဲခြား ဖို့ကျွန်တော့်ဘက်ကအမိအရမတိုက်တွန်းခဲ့ဘူး။ဒါပေမယ့်ဒီလိုခွဲခြားခံရတာကတော့ ဘယ်နိုင်ငံသားကမှသည်းခံနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ လူမျိုးရေးခွဲခြားခံရတဲ့အပေါ်ဘယ်သူကမှ သည်းမခံသင့်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူသားတွေပါ။ အသားရေအရောင် ကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတူညီကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတူညီတဲ့ဘဝသက်တမ်းနဲ့တူညီတဲ့ကမ္ဘာ မြေပြင်ပေါ်မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ လူမျိုးရေးခွဲ ခြားတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသည်းခံသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ပြုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်​ထောက်ခံမှုမပေးဘူး။ လူမျိုးရေးခွဲခြားတာကို ယနေ့ခတ်မှာဘယ်သူမှမထောက်ခံဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပဲအဆုံးသတ်သင့်တယ်။ နောက်လာ မယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွား ပါမယ်။ လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေး ရမယ်။ နောက်ပြီး …
This Year : 252743
Total Users : 547876